Recetin အယ်ဒီတာအဖွဲ့ | ချက်နည်း
Recetin တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ကလေးများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်ပတ်သက်သောဝက်ဘ်ဆိုက်။ မိခင်များစွာအတွက်ပြcommonနာမှာနေ့တိုင်းမီနူးကိုပြင်ဆင်သည့်အခါဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ဘာချက်ပြုတ်နေရသလဲ ငါဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲ ငါ့ကလေးတွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေစားတယ်? ငါဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ ငါ့ကလေးများအတွက်မျှတ။ ကျန်းမာသောအစားအစာ? ထိုမေးခွန်းနှင့်အခြားသူများစွာကိုဖြေဆိုရန်အတွက်ရေတွင်ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိချက်ပြုတ်နည်းများအားလုံးသည်ကလေးအာဟာရဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူစားဖိုမှူးများကပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည် မိဘများသည်အာမခံချက်အားလုံးရှိသည် ကျန်းမာသန်စွမ်းသောမီးဖိုချောင်ပြင်ဆင်နေခြင်း။ သင်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လိုပြီးသင်၏ချက်ပြုတ်နည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထုတ်ဝေလိုပါကသင်လုပ်ရန်လိုသည် အောက်ပါပုံစံကိုဖြည့်ပါ ငါတို့သည်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသင်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ရှာဖွေချင်ပါသလား ထမင်းချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်း? ကောင်းပြီ၊ ဒီမှာဒီမှာအသင်း ၀ င်တွေရောအတိတ်ကငါတို့နဲ့ပူးပေါင်းခဲ့သူတွေကိုပါတင်ပြထားပါတယ်။
ငါကြော်ငြာနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ဒီဂရီရှိသည်။ ငါချက်ပြုတ်ရတာ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာ၊ ကလေးငယ်ငါးယောက်ကိုနှစ်သက်ရတာ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှာကျွန်မတို့မိသားစုဟာပါရာ (အီတလီ) ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဟာစပိန်ဟင်းလျာများကိုဆက်လုပ်နေတုန်းပဲ၊ ဒီတိုင်းပြည်ကနေပုံမှန်အစားအစာတွေလည်းပြင်ဆင်တယ်။ ကလေးငယ်များပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်မွေ့စေရန်အတွက်အိမ်တွင်ကျွန်ုပ်ပြင်ဆင်သောဟင်းလျာများကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ငါမီးဖိုချောင်နှင့်အထူးသဖြင့်မုန့်၏တစ် ဦး အငြင်းပွားဖွယ်မရှိသစ္စာရှိဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကာလ၏အစိတ်အပိုင်းအချို့ကိုချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ လေ့လာခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကလေးနှစ်ယောက်မိခင်တစ် ဦး၊ ကလေးများအတွက်ချက်ပြုတ်ပေးသောဆရာဖြစ်ပြီးဓာတ်ပုံကိုနှစ်သက်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောပေါင်းစပ်ချက်ဖြစ်သည့်အတွက်စာရွက်အတွက်အကောင်းဆုံးဟင်းလျာများကိုပြင်ဆင်သည်။
ငါချက်ပြုတ်ဖို့အသည်းအသန်ဖြစ်၏, ငါ့အထူးအချိုပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေမခံမရပ်နိုင်တဲ့အရသာရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ သင်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုသိလိုပါသလား? ထိုအခါငါ့နောက်သို့လိုက်ရန်အခမဲ့ခံစားရသည်။
ကျွန်ုပ်သည် ၁၉၇၆ ခုနှစ်၌ Asturias တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကမ္ဘာနိုင်ငံသားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ခရီးဆောင်သေတ္တာထဲတွင်ဓာတ်ပုံများ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများနှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုကျွန်ုပ်သယ်ဆောင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မိသားစုနှင့်သက်ဆိုင်ပြီးအလွန်ကောင်းသည့်အချိန်၊ ကောင်းမကောင်းအခိုက်အတန့်များသည်စားပွဲတစ်ဝိုက်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ငယ်စဉ်ကတည်းကမီးဖိုချောင်တွင်ကျွန်ုပ်၏ဘဝ၌ရှိနေခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကလေးငယ်များကျန်းမာစွာကြီးထွားနိုင်ရန်အတွက်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုကျွန်ုပ်ပြင်ဆင်သည်။
ကျွန်တော့်နာမည်အိုင်ရင်း၊ ငါမက်ဒရစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်၊ ငါရူးသွပ်နေတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့စားလေ့ရှိတဲ့၊ ကလေးမစားချင်ဘူး၊ ပန်းကန်အသစ်တွေနဲ့အရသာအသစ်တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့မိခင်ဖြစ်ဖို့ကံကောင်းတယ်။ 10 နှစ်ကျော်အဘို့ငါတက်ကြွစွာခြော, Thermorecetas.com ထွက်ရပ်, အရာတို့တွင်အမျိုးမျိုးသော gastronomic blogs များထဲတွင်ရေးသားခဲ့ကြသည်။ ဒီဘလော့ဂ်ဂါလောကတွင်ကျွန်ုပ်သည်လူကြီးများနှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ရပြီးကျွန်ုပ်သား၏အစားအစာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်လှည့်ကွက်များကိုလေ့လာရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည့်အံ့သြဖွယ်ရာနေရာကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးအရသာရှိသောဟင်းလျာများကိုအတူတကွပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူစားသုံးခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။